မည်သည့် Chromebook များသည် Android အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလုပ်နိုင်သလဲသို့မဟုတ်သုံးမည်နည်း | Androidsis
မည်သည့် Chromebook များသည် Android အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလုပ်နိုင်သလဲသို့မဟုတ်သုံးမည်နည်း
ပြီးခဲ့သည့်မေလ၊ ၂၀၁၆ Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားပြီးသည့်နောက်၊ Google I / O 2016 ကွန်ဖရင့်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်အနေဖြင့် Chrome OS operating system ကိုအသုံးပြုသော Chromebooks နှင့်အခြားထုတ်ကုန်အမြောက်အများမကြာမီထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကုမ္ပဏီကကြေငြာခဲ့သည်။ Google Play စတိုးမှ Android အက်ပ်များကိုဖွင့်ပါ.
ထိုကြေငြာချက်အရလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကကုမ္ပဏီသည် Chromebook အဟောင်းများအတွက်လုံလောက်သောအထောက်အပံ့များပေးရန်အလျင်အမြန်မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်ယခု Google သည်ယခုအခါမွမ်းမံခဲ့သည်၊ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ Chromium အထောက်အကူပြုစာမျက်နှာကိုစာရင်းရှည်ပါရှိသည်။ အန်းဒရွိုက်အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသော (သို့မဟုတ်) အနာဂတ်တွင်ပေးမည့် Chrome OS ကိရိယာများ.
ဂူဂဲလ်ကိုယ်တိုင်မှရရှိသောအချက်အလက်များအရယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့သည် Chromebook ကွန်ပျူတာများနှင့်အခြားသူများဖြစ်သည် Android applications များလည်ပတ်နိုင်ပြီးသောကိရိယာများ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းတွင် Chrome operating system နှင့်အတူ:
Google Chromebook Pixel (၂၀၁၅)
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်အတူ Acer Chromebook R13 (CB5-312T) နှင့် Asus Flip C302 Chromebook တို့ကိုယနေ့အချိန်၌ Android application များအသုံးပြုနိုင်သောကွန်ပျူတာများအနေဖြင့်၎င်း၏ Beta Channel operating system အောက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဗားရှင်း။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဂူဂဲလ်မှထိုအချက်ကိုညွှန်ပြထားသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် အကယ်၍ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် Beta Channel တွင်ပေါ်လာပါက၎င်းသည် Android တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Android အထောက်အပံ့ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။Chrome OS မှအီး။
Google မှထုတ်ဝေသောစာရင်းနှင့်သင်အပြည့်အဝတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည် ဒီမှာ8 ထက်ကျော်လွန်သောစုစုပေါင်းလည်းပါဝင်သည်0 "Planned" အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ထားသော Chrome OS ကိရိယာများ ၎င်းတို့အနေဖြင့် Android application များနှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အတိအကျသောနေ့ရက်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်များမပေးထားပါ။
Google က၎င်းကိုပြောဆိုသည် Chrome OS ကိရိယာများကိုပိုမို ဆက်လက်၍ အကဲဖြတ်ရန် Android application တွေကိုသုံးလို့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သီးသန့်ပုံစံမပေါ်လာဘူးဆိုရင်နောင်လာမယ့်စာရင်းမှာပါလိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Google ကအတည်ပြု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Chromebook အားလုံးသည် Android အက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ချက်ချင်းမကျမည်အကြောင်းပေမယ့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » မည်သည့် Chromebook များသည် Android အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလုပ်နိုင်သလဲသို့မဟုတ်သုံးမည်နည်း
Xiaomi သည်ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိသောအားကစားကိုအာရုံစိုက်သည့်စမတ်နာရီတစ်လုံးကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
YouTube Kids app သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတီဗွီများသို့ရောက်ရှိခြင်း